Nuxurka Khudbad uu Madaxweynuhu Ka Jeediyay Xuska Aasaaska Ciidamada Booliska Somaliland | Somaliland Post
Home News Nuxurka Khudbad uu Madaxweynuhu Ka Jeediyay Xuska Aasaaska Ciidamada Booliska Somaliland
Nuxurka Khudbad uu Madaxweynuhu Ka Jeediyay Xuska Aasaaska Ciidamada Booliska Somaliland
Hargeysa(SLpost)-Maxamed Siilaanyo waxa uu maanta ka qaybgalay Xuska Sannad Guurada 22aad ee ka soo wareegtay Aas-aaska Ciidanka Booliska Jamhuuriyada Somaliland.
Xuskan ayaa sanad walba lagu qabtaa xarunta Taliska guud ee Ciidamada Booliska Somaliland.
Madaxweynaha oo halkaasi ka hadlay waxa uu ugu horayn hambalyeeyay ciidamada Booliska JSL, islamarkaana ku ammaanay shaqada ay qaranka u hayaan. Waxa kale oo uu ka hadlay in ilaalinta nabaddu ay tahay waajib qaran oo aan cidna looga habranayn. Waxa hadaladii madaxweynaha ka mid ahaa “Farxad weyn bayn ii tahay inaan maanta kasoo qeyb galo Munaasibada Sannad guurada 22aad ee aas-aaska Ciidanka Booliska Jamhuuriyada Somaliland, ciidanka booliska somaliland waa waxay ku fadhido nabadgelyada dalka iyo dadku uu ku faano.
waxaan mahad weyn u celinayaa Ciidankaa heerkastuu yahay Dadka hadii aan la kala celin oo la ilaalin oo shariciga la ilaalin oo cid ilaalisa loo samayn wax badan baa laysku qabsanayaa wax badan baa inaga fakanaya,.
Dal Dimuqraadi ah baynu nahay dad wada jira baynu nahay Siyaasada waa layskaga hor imanayaa, danaa la kala leeyahay qaab kala duwan baa wax loo arkaa laakiin farsamo iyo cilmi iyo aqoon iyo nidaam baa lagu kala baxaa wixii nidaamkaa ka baxsan ee nabadgelyada wax yeelaya cid laga yeelayaa ma jirto Booliskuna wuxuu u samaysan yahay inuu nabad gelyada ilaaliyo cid kastaba ha noqotee”.
Madaxweynaha JSL Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo Hadalkiisa sii wata ayaa yidhi ” markaa waxaan leeyaahay dadka qaarkood waa laysku qabsanaya waa layska hor imanayaa laakiin cidna ka yeeli mayno cidna laga aqbali maayo intaynu ciidankeenaa booliska iyo ciidamada kale nabad gelyada ilaaliya aynu haysano in cidina wax yeesho oo ummaddaa iyo dadkaa nabadgelyada iyo xasiloonida haysta ay ku cayaarto nabadgelyadaa iyo xasiloonidaa aynu leenahay.
waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa ciidamada booliska madaxdiisa, masuuliyiintiisa iyo mijihiisaba sida fiican ee qaranimada leh ee hawshaa, xilkaa loo igmaday ay u ilaaliyaan, waxaan leeyahay hanbalyo aad iyo aad u balaadhan baan usoo jeedinayaa Ciidanka Booliska, Ubadkooda iyo Xaasaskoodaba aad iyo aadna waad u mahadsan tihiin”.
Halkan ka Daalaco Khudbadda Madaxweynaha oo Muuqaal ah: